Posted by Tranquillus | Feb 1, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Wax kasta oo xilligu yahay, waxtarnimadu had iyo jeer waxay ahayd tayo lagu daba joogo adduunka xirfadleyda ah. Tayaduna sidoo kale kuma saareyso xadadka marka ay timaado dhanka qorista shaqada (sidoo kale loo yaqaan qoraalka waxtarka). Xaqiiqdii, waxay ka koobantahay: warbixinta waxqabadka, waraaqaha, qoraalada, warbixinta ...
Tusaale ahaan, waxaa la i weydiiyay marar badan in aan dib u eego shaqada asxaabteyda xagga xirfadda. Waxaan is arkay in badankood, waxaan la kulmay qoraallo aan ku habboonayn heerkooda waxbarasho haba yaraatee, ama xitaa xirfadeena xirfadeed. Tixraac, tusaale ahaan, weedhan:
« Marka la fiiriyo meesha uu ku sii kordhayo taleefanka gacantu nolosheena, warshadaha taleefoonku waa hubaal inay horumari doonaan sanado badan oo soo socda.. »
Xukunkan oo kale ayaa loo qori karay qaab ka fudud, wax walbana ka waxtar badan. Sidaas awgeed waan heli karnay:
« Meesha sii kordheysa ee moobaylka nolosheena waxay hubineysaa horumarinta qaybta taleefanka muddo dheer soo socota. »
Marka hore, ogow tirtirka muujinta "aragtida". In kasta oo adeegsiga weedhani aanu ahayn khalad qalad ah, haddana weli waxtar uma leh fahamka jumladda. Runtii, weedhan ayaa aad ugu badan weedhan; jumladan oo loo adeegsanayo ereyo badan oo caan ah waxay u saamaxaysay aqriste kasta inuu sifiican u fahmo macnaha guud ee fariinta la gudbiyay.
Kadib, adoo tixgelinaya tirada ereyada jumladdaas, waxaad dareemi doontaa farqi u dhexeeya ereyada 07. Xaqiiqdii, ereyada 20 ee xukunka dib looqorey ee kadhan ah 27 erey ee jumlada hore. Guud ahaan, xukunku waa inuu ku jiraa celcelis ahaan 20 eray. Tiro ku habboon oo ereyo ah oo tilmaamaya adeegsiga weedho gaagaaban oo isla cutub ku jira si loo helo dheelitirnaan ka wanaagsan. Aad ayaa looga feker karaa in lagu beddelo dhererka jumladaha cutubka si loo helo qoraal qaafiyad badan. Si kastaba ha noqotee, jumladaha in ka badan 35 eray ma fududeeyaan akhrinta ama fahamka, sidaasna waxay ku caddaynaysaa jiritaanka xadka dhererka. Xeerkani wuxuu khuseeyaa qof kasta ha ahaado qof fudud ama aqoonyahan, maadaama xadgudubkiisu caqabad ku yahay awoodda xusuusta gaaban ee maskaxda aadanaha.
Intaa waxaa dheer, ogow sidoo kale beddelka "sanado badan" oo "dheer". Doorashadan badiyaa waxaa loola jeedaa daraasadaha Rudolf Flesch akhriska, halkaasoo uu ku muujiyey muhiimadda ay leedahay adeegsiga ereyada gaagaaban si loo helo waxtarka weyn ee akhriska.
Ugu dambeynti, waxaad arki kartay isbeddelka wejiga oo ka socda cod-hawleed una socda cod firfircoon. Xukunka sidaas ayaa loo fahmi karaa. Runtii, qaab dhismeedka jumladan lagu soo bandhigayo wuxuu si cad oo qeexan u muujinayaa xiriirka ka dhexeeya doorka sii kordhaya ee taleefanka iyo horumarinta suuqa taleefannada. Sabab iyo saameyn xiriir oo u oggolaaneysa akhristaha inuu fahmo mawduuca.
Ugu dambayntii, qorista qoraal waxay si fudud ugu oggolaaneysaa qaataha inuu u akhriyo illaa dhammaadka, si uu u fahmo isagoo aan su’aalo weydiin; waa halka ay waxtarka qoraalkaagu ku yaal.
Ujeedo wax ku oolnimada adoo si fudud u qoraya! Febraayo 8, 2021Tranquillus
horeFogaanshaha, maaskarada, cunnada: isbeddelo cusub oo lala xiriirinayo dillaaca Covid-19
socdaMiyuu heshiis wada jir ah oo bixiya dheefaha mushaharka dib loogu noqdaa falcelinta shaqaalaha la eryey ka hor intaan la saxiixin?